Kharashaadka Qarsoon ee Badan ee Domains-ka Raqiisan | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Kharashyada Qarsoon ee Badan ee Domains-ka Raqiiska ah
Kharashyada Qarsoon ee Badan ee Domains-ka Raqiiska ah
0 Daqiiqado 8 ayaa akhriyay
Ma go'aansatay inaad bilowdo degelkaaga? Taasi waa wax fiican!
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan doontaa waa inaad dooro magac domain oo ku diwaangeli mid ka mid ah diiwaangeliyeyaasha domain ee badan ee laga heli karo shabakadda. Kaliya waxaad helaysaa heshiis weyn oo guji "iibso." Fudud ku filan, sax?
In kasta oo aad ka heli karto boggag xayeysiisyada xayeysiiska ah ee ugu hooseeya sida 99 senti, heshiisyada-aad-u-wanaagsan-runtu badanaa waa intaas. Diiwaangeliyayaasha caajiska ah ayaa lagu yaqaanay inay ku soo jiitaan dadka ugu horreeya qiimo jaban oo kaliya si ay ugu xidhaan kharashyada qarsoon hadhow.
Haddaba maxay yihiin qaar ka mid ah xeeladaha qarsoodiga ah ee ku dhammaanaya kharashka iibsadayaasha lacag dheeraad ah? Sideedse uga fogaan kartaa in lagu nuugo heshiis raqiis ah oo isu beddelaya madax-xanuun qaali ah? Allow ii sharax. Kadibna waxaan ku siin doonaa talooyinka aad u baahan tahay si aad u doorato domain qiimo ah oo aan waxba yeeli doonin boorsadaada.
Fikraddaada Wayn waxay ku bilaabataa Magaca Domain
Ha u ogolaan qof kale inuu diiwaan geliyo URL kaaga. Raadi DreamHost's 400+ TLDS si aad u hesho ku habboon mareegahaaga.
5 Tactics Sneaky Ay Isticmaalaan Diiwaan Geliyeyaasha Raqiiska ah
Waxaa jira siyaabo badan oo ay diiwaan-geliyayaasha domain-ku kuugu soo celin karaan ballanqaadka domain raqiis ah, ka dibna ku rogi qoraalka adiga. Markaa waa muhiim in la fahmo xeeladaha ay adeegsadaan iyo sida loo garto calamada cas marka la diiwaangelinayo domain.
Aan eegno shan ka mid ah siyaabaha ugu caansan adduunka jaban domain diiwaangelinta wuxuu noqon karaa mid aad uga qaalisan sidii aad filaysay.
1. Lacagaha Qarsoon
Cabashada ugu badan ee ay dadku qabaan marka la diiwaan gelinayo domain waa biilasha iyo kharashyada cusboonaysiinta ee lagu leeyahay diiwaan-hayaha domainka.
Kharashaadka "Auto-Cusbooneysii" iyo "Turfer Out" inta badan waa dambiilayaasha foosha xun. Ama waxaad ogaan kartaa in diiwangeliyahaagu uu ku soo rogayo kharash dheeri ah sababta oo ah ma dooran ikhtiyaarka dib-u-cusboonaysiinta. Waa inaad awood u yeelatid inaad xakamayso inaad si toos ah u cusboonaysiin karto boggaaga, iyo in kale, diiwaan-hayahaagu waa inuu noqdaa mid hufan oo ku saabsan doorashooyinka is-cusboonaysiinta iyo khidmadaha suurtogalka ah ee ku lifaaqan.
Waxaa dheer, haddii aad rabto inaad magacaaga domain u wareejiso diiwaangeliye kale, diiwaangeliyahaaga hadda waxa laga yaabaa inuu kugu dalaco lacag laba ama saddex jeer ah wixii aad markii hore ku bixisay domainka. Diiwaangeliyayaal badan ayaa ku tiirsan xaqiiqda ah in isticmaalayaasha badankood aysan akhriyin daabacaadda dheer ee cufan ee ka kooban Shuruudaha Adeegga.
Relacionado: Ma ku iibsan Domainkaaga DreamHost? Eeg Talooyinkan Wareejinta Domain
2. Qiima dhimista hore
Ka dib qiimo dhimista sanadka koowaad ee iibsashada magac domain, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto xaalad uu qiimaha cusboonaysiinta domainkaas aad uga sarreeyo. Daabacaadda ganaaxa ee qandaraasyada diiwaan-hayaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay kugu xiraan laba sano ama ka badan, iyo qiimaha sanadka labaad iyo kan labaad ayaa si aad ah u kordhi kara. Qandaraasyada sannadaha badan waxay noqon karaan faa'iido haddii taasi ay tahay waxa aad raadineyso, laakiin hubi inaad ogtahay waxa aad galayso ka hor diiwaangelinta.
Diiwaan-geliyayaasha ayaa tan u sameeya si ay dib ugu soo ceshadaan kharashaadka dhimista sanadka koowaad. Waxaa dheer, inta badan waxaa jira siyaasad lacag celin ah oo ku xiran qandaraaska. Mar labaad, akhrinta farta wanaagsan waa furaha.
Aragtida La Dhaqan Karo ee Sanduuqaaga
Haddii aad u baahan tahay caawimo helista dhegaystayaal la beegsanayo, samaynta xeeladda suuq-geynta dhijitaalka ah ee ugu habboon, ama fahamka sababta dib u cusboonaysiinta magaca domain aad qaali u ah, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
3. Qarsoodinimada WHOIS
WHOIS waa xog-ururin dadweyne oo online ah oo kuu ogolaanaysa inaad raadiso macluumaadka xidhiidhka qaarkood ee ku saabsan shakhsi, ganacsi ama hay'ad diiwaan gashan domain. Maadaama mid kasta iyo mid kasta oo cusubi ay tahay in laga diiwaan geliyo WHOIS, waa inaad buuxisaa macluumaadka ku habboon ee loo baahan yahay ka hor inta aan boggaaga si rasmi ah loo diiwaan gelin.
Inta lagu jiro isdiiwaangelinta, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad xogtan ka dhigto mid sir ah oo aanay dadweynuhu heli karin. Sababtoo ah sida Waxaan wax ka qornay sirta domain 2016, "Lahaanshaha nidaam diiwaangelin furan oo qof kasta uu ku arki karo ciwaanka gurigaagu waxay u egtahay fikrad aad u xun."
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in inta badan diiwaan-geliyayaasha domain ay bixiyaan ilaalin gaar ah. Qabashada? Qaarkood waxay ka qaadaan inta u dhaxaysa $10 ilaa $20 sanadkii intarneedkan aasaasiga ah waa inuu lahaadaa. Sharaxaadkooda tan waxaa laga yaabaa inay tahay inaad u baahan tahay inaad bixiso "lacag maamul" dheeraad ah si aad u gasho diiwaannadaada WHOIS. Ma iibsanayno, in kastoo. At DreamHost, Waxaan u tuurnaa sirta WHOIS si bilaash ah mar kasta oo aad naga diiwaan geliso TLD-yada xaqa u leh.
Ma qabatay shaygaas “u banaan”? Taasi waa digniin muhiim ah.
Taasi waa maxaa yeelay, diiwaangelinta - dadka mas'uulka ka ah TLD gaar ah oo loogu talagalay adduunka oo dhan; in aan lagu khaldin a diiwaan-hayaha sida DreamHost - waxay dejiyaan shuruudaha u gaar ah milkiilayaasha domain. Qaar ka mid ah diiwangelinta si fudud uma oggola milkiilayaasha domain in ay liis gareeyaan wax aan ahayn faahfaahinta xiriirka iyaga u gaar ah. Tusaale ahaan, TLDs sida .ca, .de, .eu, .io, iyo .annagu ma oggolaanno sirta WHOIS in la oggolaado Hubi inaad ka warqabto xaddidaadda bogga aad dooratay ka hor inta aanad lacag caddaan ah dhigin.
Hal sharci oo kale oo muhiim ah in la xasuusto: ICANN waxay ku amri doontaa quful 60-maalmood ah mar kasta oo aad cusboonaysiiso diiwaannada boggaaga. Waxaa la aasaasay Diisambar 2016, qufulka wareejinta waxaa loogu talagalay in lagu dhimo tuuganimada domainka iyo khiyaanada.
Laakiin ka waran haddii aad tahay isticmaale awood leh shabakado badan ama aad rabto inaad wareejiso lahaanshaha domainka inkasta oo aad cusboonaysiisay dhawaan? Qaar badan oo ka mid ah diiwaaniyeyaasha domain kuma caawin karaan
DreamHost, kuma jirno ganacsiga xayiraadaha sabab la'aanta ah. Waxaan ku siin ikhtiyaarka ah inaad ka baxdo qufulkan Si aad u awooddo had iyo jeer noqo maamulaha domainkaaga.
Relacionado: Hagaha bilowga ah ee Diiwaangelinta Magaca domainka
Marar badan, diiwaan-bixiyeyaasha domain waxay kugu soo celin karaan soo jeedin fudud: Ku iibso domain raqiis ah laba ama saddex tillaabo oo fudud. Kadib diiwangeliyaha waxa uu sii wadaa in uu isku dayo in uu kugu cadeeyo hal milyan oo badeecooyin iyo adeegyo kala duwan ah -mararka qaar ka mid ah kafaala-qaadayaasha lacagta aan la xiriirin - oo aadan waligaa rabi doonin ama u baahnayn.
Shaashadda ka dib shaashadda xayaysiisku waxa ay qastaa waayo-aragnimada wax iibsiga oo ay muujiso ujeeddada dhabta ah ee diiwaan-hayaha: iibiso goobo raqiis ah, ururso doollar xayaysiis ah.
Tani way ka duwan tahay diiwaan-hayaha sida DreamHost oo iibiya domains iyo sidoo kale waxay bixisaa martigelin shabakad tayo leh. Waxaan tan u samaynaa sababtoo ah ku haynta qorshahaaga martigelinta iyo diiwaangelinta domainka hal saqaf, tusaale ahaan, run ahaantii waa habka ugu fudud ee lagu maareeyo mareegaha.
Sababtoo ah wax walba waxay ku midaysan yihiin hal akoon oo si fudud loo galo.
Laakiin - tani waa mid weyn - ma samaynaysid waa in ay iibsadaan martigelinta iyo bogga internetka ee martigeliyahaaga isku mar. Ha u ogolaan qofna inuu si kale kuu sheego. Waa wicitaankaaga!
Markaa iska hubi haddii diiwangeliyaha uu isku dayayo inuu kaaga cadhaysiiyo heshiis xidhmo ah inaad qabato shaqadaada guriga si aad u hubiso in adeegyadu ay yihiin kuwo si cadaalad ah loo qiimeeyo ka hor intaadan dhiibin lambarrada kaararka deynta.
5. Adeegyada Taageerada Qaaliga ah
Khaladaadku waxay mar walba ka dhacaan shaqada gudaha ee shabakadda. Adeegayaashu hoos ayey u dhici karaan, Korontadu way bixi kartaa. Waxyaabaha dhacaya, iyo marka ay sameeyaan, aad rabto in aad diiwaan domain in aad leedahay nidaam taageero oo waxtar leh oo dareen leh. Haddii DNS-kaagu si ku-meel-gaar ah u jawaabin ama ciwaanka iimaylkaagu aanu si sax ah u shaqayn, waxaad doonaysaa inaad hubiso inaad haysato hab aad kula xidhiidho dadka ay tahay inay ku caawin karaan.
Nasiib darro, qaar ka mid ah diiwaan-geliyayaasha ayaa dhab ahaantii dalaci doona kharashyo dheeraad ah si ay taageero u helaan. Waxa laga yaabaa inay xitaa xaddidaan awooda akoonkaaga ama ay isku dayaan inay kugu soo dalacaan khidmad dheeraad ah sanadkiiba si ay u galaan qaar ka mid ah goobaha muhiimka ah sida DNS kaaga iyo server-yadaada.
Ma fiicna DreamHost, waad awoodaa chat la shaqaalahayaga taageerada ama kor u eeg domain sida loo galo our Base aqoonta - lacag la'aan.
Relacionado: Sida loo doorto Bixiyaha Martigelinta Shabakadda - Liiska hubinta ee 15-dhibcood
Waa kan heshiiska
Sida iska cad, ma aha dhammaan diiwaan-geliyayaasha domain inay ku helaan. Ma rabno inaan ka cabsano ama aan kaa nixino dhisida degelkaaga ugu horreeya. Hadafka halkan waa in lagu baro calamada cas si aad u ilaaliso marka aad qiimaynayso diiwaan bixiyayaasha domainka. Markaa anagoo taas maskaxda ku hayna, aan ka hadalno sidii aad uga fogaan lahayd kharashaadkan qarsoon oo aad u yeelan lahayd khibrad wax-iibsasho weyn.
Ka Fogaanshaha Kharashka Dahsoon ee Domains-ka jaban
Aad u badan dhammaan arrimaha ku saabsan "gotcha" qiimaha kor u kaca ee cheap domain magacyada waxaa lagu aqoonsan karaa lagana fogaan karaa iyadoo si fudud loo baaro kaaga diiwaan-hayaha iyo helitaanka hilibka iyo baradhada waxa ay hayaan iyo inta adeegooda dhabta ah ay ku kacayso.
Marka aad wax ka iibsanayso domain - ama wax kasta oo onlayn ah, runtii - xasuusnoow isla xeerka aad codsan lahayd markaad wax ka iibsanayso aduunka dhabta ah. Haddii heshiisku u muuqdo mid aad u wanaagsan inuu run noqdo, waxay u badan tahay inuu jiro qabsasho.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in lagu sasabo domain $0.99 ah. Laakin ka hor inta aadan ku dhufan "diiwaangelinta", waa inaad akhridaa daabacaadda ganaaxa.
Hubi inaad ogtahay waxa domainku dhab ahaantii ku kici doono; Ha ku xad-gudbin heshiis sannado badan ah oo qiimuhu si aad ah u kici karaan sanadka ugu horreeya ka dib.
Cilmi baaris ku samee siyaasadaha taageerada diiwaan-hayaha. Ma jiraan kharashyo dheeraad ah oo ku saabsan la xidhiidhida taageerada?
Soo ogow haddii aad ka bixi karto qufulka ICANN ee 60-ka maalmood ah haddii aad u baahan tahay inaad beddesho boggaga ama aad samayso isbeddello dheeraad ah.
Hubi inaad awood u siin karto sirta WHOIS oo aad xaqiijiso inta (haddii ay jiraan) ay tahay inaad ka takhalusto si aad u ilaaliso macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Ugu dambeyntii, akhri qaar ka mid ah faallooyinka nolosha dhabta ah ee aadanaha. Haddii diiwangeliyaha uu hadh hore ahaa, waxaad sharad ku geli kartaa in ay jiri doonaan tiro dad ah oo ka tagaya faallooyinka ur urta ee internetka. Waad ku mahadsan tahay, macaamiisha daacadda ah!
Relacionado: 11ka ugu sarreeya SEO ee Dhaqamada ugu Fiican ee Domains
Waa kan sida uu u eg yahay Diiwaan-hayaha Domain-ka Wanaagsan
Haddii ay dhacdo in aad dareento in dhammaan talooyinkan waxa la iska ilaaliyo, waxaanu hoos u dhignay liis hubineed waxtar leh. Halkan waxaa ah 5 arrimood oo muhiim ah a wanaagsan domain diiwaan- waxay sameyn doontaa si aad u bixi karto oo aad doorato bixiyaha domain-ka bilaa been-abuurka ah.
1. Lacag Qarsoon malaha
Wax kasta oo aad ku bixiso - laga bilaabo diiwaangelinta bilowga ah ilaa kharashyada adeeg kasta - waa inay bannaan yihiin oo ay fududahay in la fahmo xilliga is-diiwaangelinta.
2. Astaamaha Qarsoonnimada Weyn
Ilaa iyo inta uu TLD-gaagu u qalmo, waa in aad WHOIS ku haysaa sirnimadaada oo lagu daro diiwaangelintaada. Diiwaangeliyaha sidoo kale waa inuusan waligii iibin ama la wadaagin xogtaada shakhsiyeed cid saddexaad.
3. Lacag-bixinta hore
Diiwaangeliyayaasha tayada leh ayaa horay u bixin doona diiwaanka muddada gaarka ah ee aad diiwaan gelisey boggaaga. Marka aad dhammayso diiwaangelinta hore, boggagaagu waa inuu ahaadaa mid firfircoon oo habaynta akoonkaaga la heli karo.
4. WHOIS Adeegga Iimaylka Qarsoodi ah
Diiwaan-hayaha wanaagsani waa inuu ku bixiyaa adeegga iimaylka WHOIS adiga oo aan haba yaraatee wax qiimo ah kugu fadhiyin. Tani way ka duwan tahay adeegga iimaylka oo buuxa sida Gmail. Waa ciwaanka iimaylka si toos ah loo soo saaray, oo dadwayne soojeeda kaas oo fariimaha u marinaya ciwaanka emailkaaga dhabta ah adigoon bulshada u soo bandhigin.
5. Taageero Wayn (Bilaash).
Wakiil ka socda kooxda taageerada diiwangeliyahaaga waa inuu si degdeg ah uga jawaabaa su'aalahaaga oo aanu si xad dhaaf ah ugu adkaysan xayaysiinta adeegyada dheeraadka ah ee ay bixin karaan. Taageeradana waa inaysan kugu kicin wax doolar iyo senti dheeraad ah.
Relacionado: Hagaha Dhamaystiran ee Domains-Heer Sare ee Cusub (TLDs)
Waxa ugu Muhiimsan Marka Domain Shopping
Runtii way fududahay: Ka fikir wakhti dheer.
Ha ku xalin gimmicks raqiis ah, xarfaha bilicdasan, ama qiimayaasha waallida ah ee hooseeya. Ka fiirso inta haysashada iyo ilaalinta magaca domain ay kugu kacayso wadada. Waxaa laga yaabaa inaadan helin qiimo-dhimis weyn bilowga diiwaangelinta, laakiin waxaa hubaal ah inaad lacag kaydsan doonto mustaqbalka fog haddii aad raacdo diiwaan-hayaha domain kaas oo anshax leh, qiime leh, iyo kharashyo dheeraad ah iyo taageero.
Markaa diyaar ma u tahay inaad iibsato a domain magaca oo bilow adiga cusub website? DreamHost waa halkan si ay u caawiso. Waxaan haynaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u hesho goobtaada cusub, oo ay ku jiraan kuwa fudud domain diiwaangelinta iyo adkeyn la wadaago martigelin qorshooyinka. Iska hubi noo 400+ TLDs la heli karo maanta!
3 ugu Fiican Barka Ogeysiinta WordPress
Fiidiyowga: Pam Auugst oo ku saabsan automation SEO & XML sitemaps